प्रचण्डले क्रान्तिलाई धोका दिए : लोकेन्द्र विष्ट मगर | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
प्रचण्डले क्रान्तिलाई धोका दिए : लोकेन्द्र विष्ट मगर
साउन ५ गते, २०७२ - १५:०२
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री तथा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री बनेका लोकेन्द्र बिष्ट मगर बामपन्थी राजनीतिको प्रभावमा परी विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिमा हाम फाले । जनयुद्धमा सैन्य मोर्चाको कमिसार हुँदै पार्टीको स्थायी कमिटीसम्म पुगेर राजनीतिबाट टाढिने निर्णयका साथ एमाओवादीको हेडक्र्वाटरमा राजिनामा बुझाएका ती थोरै नेताहरु मध्ये पर्दछन् जसले जनयुद्ध पनि लडे र शान्तिकालमा मन्त्री पनि भए ।
उनी तिनै नेता हुन् जसले माओवादीको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशसँगै अन्तरिम संसदमा हतियार लिएर जाँदै गर्दा सुरक्षाकर्मीले रोक्दा त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए र आफूहरुले हतियार लिएर जान पाउनु पर्ने अडान लिएका थिए । उनले त्यसबेला दिएको अभिव्यक्ति पनि निक्कै चर्चाको विषय बनेको थियो । उनले चैत्र १७ गते पार्टीलाई आफ्नो राजिनामा पत्र बुझाए र पार्टीको व्यस्त राजनीतिक जीवनबाट टाढिदै काभ्रेको भकुण्डेबेसीमा धान तथा भटमासको खेतीमा व्यस्त किसान जीवन बिताई रहेका बिष्टले खबरडबलीका नरेश ज्ञवालीलाई दिएको अन्तरवार्ता ।
तपाईले पार्टीबाट किन राजिनामा दिनु भएको हो ?
पार्टीबाट राजीनामा दिएको होइन । मैले पार्टीको पद र जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको हुँ । बिग्रेको, भत्केको र जिर्ण पार्टीको ठूलो नेता हुनु भन्दा सप्रेको, सद्धे र सानो पार्टीको सानो नेता भएर बस्दा राम्रो हुन्छ भन्ठानें अनि राजिनामा दिएँ ।
बिग्रेको भन्ने बल्ल थाहा भयो हगी ?
माओवादी पार्टी बिग्रेको धेरै अघिदेखि नै हो । यसले दक्षिणतर्फको यात्रा गर्दैछ भन्ने भान हामीलाई अथवा मलाई धेरै अघि नै थाहा भएको हो तर, अब फर्केला, अब फर्केला भनेर आशा र विश्वास गरियो तर सबै प्रकारले लाथालिङ्ग भयो । अब यसको दक्षिणतर्फको यात्रापनि अर्कै दिशातर्फ उन्मुख रहेको मलाई भान भइरहेको छ ।
तपाईंले पार्टीबाट होइन जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिएको भनेर कस्तो कुटनीतिक शब्द प्रयोग गर्नु भएको हगी ? भोली फेरी राम्रो पद प्रतिष्ठा पाएमा जाने बाटो पनि खोली राखेको होला होइन त ?
लोकेन्द्र बिष्ट भनेको जालझेल, तिकडम गर्ने, कुटिल चाल चल्ने राजनीतिक व्यक्ति थिएन र होइन । आज म जहाँ आई पुगेको छु त्यसमा मेरो पार्टीको भूमिका पनि होला र सँग–सँगै मेरो भूमिका पनि होला । अहिले मेरो जीवनलाई म सामान्य नागरिकको स्तरबाट जिउन खोज्दैछु । पहिला पनि म साधारण व्यक्ति नै थिएँ, अहिले पनि साधारण नै छु । तपाईंले भने जस्तो गरि कसैसँग पद प्रतिष्ठाका लागि पाउ पर्ने मान्छे होइन म । त्यसैले त्यस्तो कहिल्यै गर्ने छैन ।
त्यसो भए अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म अहिले सक्रिय राजनीतिबाट अलग्गिएर साधारण जीवन बिताउँदै छु । साधारण जीवन भनेको हलो, कुटो, कोदालो गरेर एक छाक खाना र एक जोर लुगाको जोहो गर्ने नै हो । अहिले म त्यसैमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै छु, अर्थात् खेतीपातीमा लागेको छु । काभ्रेको भकुण्डेबेसीमा २० रोपनी जग्गामा नयाँ प्रजातीको कालो धान रोप्दैछु । साढें चार रोपनीमा भटमास रोपेको छु । कालो धानको ब्याड तयार हुँदैछ ।
यो राजिनामा राजनीतिक विश्राम हो अथवा राजनीतिप्रतिको विकर्षणको परिणाम ?
कुरा सजिलो छ । यो राजनीतिप्रतिको विकर्षणको परिणाम होइन कि यो राजनीतिबाट विश्रामको उद्देश्यसहित लिइएको निर्णयको कार्यान्वयन मात्र हो ।
दुई पटकसम्म मन्त्री भई सकेको मान्छे अब सर्वसाधारणको जीवन बिताउँछु भन्दै गर्दा मानिसहरुले हेप्दैनन् र ?
एक जना चिन्तकले एउटा प्रशंगमा– राजनीतिबाट अलग्गियौ भने तिमीलाई निक्कै सानो भन्दा सानो मजदुर ‘लो म्यान’ ले पनि हेप्छ भनेका थिए । अहिले यो भनाई मेरो वर्गले ग्रहण गर्न हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन । कतिपय अराजनीतिक मान्छेहरुले हेप्ने पनि हुन्छ होला तर मलाई त्यस्तो केहीपनि छैन । मेरो बुबा किसान हुनुहुन्थ्यो । म पनि अहिले किसान नै भएको छु ।
३४ वर्ष राजनीतिमा बिताएँ, कयौं पटक जेल परें, पार्टीको स्थाई कमिटी सदस्य भएँ, सभासद् भएँ, मन्त्री भएँ तर अहिलेको राजनीतिको छाँट र दिशा राम्रो लागेन, त्यसैले नागरिक र किसानको हैसियतमा बस्ने निर्णय गरेको हुँ । तर पनि म राजनीतिक व्यक्ति नै हुँ । पार्टीलाई दोष लगाउने कुरा छैन तर मैले जुन पार्टीमा राजनीतिक जीवनको उचाई हाँसिल गरें, त्यो पार्टी अब पुरानो पार्टी रहेन नयाँ पार्टीमा बस्न मन लागेन ।
पार्टी यहाँसम्म आएकोमा यसको मुख्य दोष नेतृत्वलाई नै जान्छ । अध्यक्षको हैसियतले यसको जिम्मेवारी प्रचण्डको हो र बाबुरामको पनि हो । अहिलेको पार्टीमा माथिल्लो कमिटीमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनेन, त्यसैले राजिनामा दिएको हुँ ।
तपाई पार्टीमा प्रचण्डको निक्कै ठूलो प्रशंशक भएर कुरा गर्नु हुन्थ्यो अहिले प्रचण्ड दोषी हुन् भन्नु हुन्छ, भनेपछि प्रचण्डसँग तपाईंको मोहभंग भएको हो ?
जनयुद्धका कमाण्डर श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडलाई म निक्कै आदर गर्छु । तर यो पार्टी बिग्रनुमा उहाँ नै मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ । मैले र म जस्ता धेरै साथीहरुले पार्टी बिग्रीएकोमा बनाउने प्रयास गर्यौं तर सकिएन । प्रचण्डले क्रान्तिमा धोका दिनुभयो । पार्टीमा हुने धोका, प्रपञ्चहरु देखेर पार्टीको ठूलो पोष्टको सेरोमोनियल भएर बस्न मन लागेनँ, अनि राजिनामा दिएँ ।
क्रान्तिलाई प्रचण्डले धोका दिए भन्दै गर्दा यसमा बाबुराम, प्रकाश र मेरो पनि भूमिकाको कुरा आउँछ । म त्यसलाई नकार्न सक्दिनँ तर यसको मूल जिम्मेवारी त प्रचण्डले नै लिनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो टोलीले त्यसलाई सुधार्न, मिलाउन निक्कै प्रयास ग¥यो तर अहिले आएर मैले सकिनँ भन्ने महसुस गरेको छु ।
साउन ५ गते, २०७२ - १५:०२ मा प्रकाशित
सिगांपुर जाँदै प्रधानमन्त्री ओली : प्रचण्डले पाउलान् कार्यकारी अध्यक्ष ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परिक्षणका लागी आज अपरान्ह सिंगापुर...
काठमाडौं । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भनेर २ दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका विदेशमन्त्री...
पोग्बाले पेनाल्टी मिस गरेपछि युनाईटेड निराश
काठमाडौं । इङलिस प्रेमिएर लिग अन्तर्गत सोमबार राती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले वुल्भससंग...
एकताको नाममा नेताहरुमाथि खेल्ने र लडाउने काम भएको छ, यसरी एकता सम्भव हुँदैन् : अष्टलक्ष्मी शाक्य
स्कुल विभागको नेतृत्व विवाद बारे नेता राम कार्की भन्छन् : मन्त्रीको पद झैं हानथाप भएको छ तर, यो राम्रो कुरा हो
संसदकी सक्रिय सांसद डा. डिला संग्रौलालाई प्रश्न : सोधेको प्रश्नको सुनुवाई भयो त ?
कान्छा जिल्ला अध्यक्षलाई ११ प्रश्न – ‘ युद्ध ! सुन्दै डरलाग्दो ! कसरी सम्झनुहुन्छ ?’
विप्लवको पछिल्लो अन्तर्वार्ता –आखिर के चाहन्छन् विप्लव ?
नयाँ पार्टी बनाउने कि, पुच्छर भएको पुरानै पार्टीको ढिपि कस्ने ?
एमालेको अहमले पार्टी एकतामा शंका उत्पन्न गरायो
एमालेले त्यसो गरेन भने प्रचण्डले भनेजस्तै एकता ड्याम्मै हुन्छ
राज्यको हेराई नै गलत हुँदा ६ न. प्रदेश गरिव वन्न पुगेकाे हाे, अब सम्वृद्व बन्छ
६ नं. प्रदेशकाे समृद्धि हेर्न निम्ता दिने प्रदेश बनाउने सपना छ : नरेश भण्डारी
वाम गठबन्धनले पहिचानको मुद्धा थप सशक्त हुन्छः मातृका यादव
हामी जितेर रोल्पा जिल्लामा जनसत्ता चलाउँछौ– पूर्ण केसी
कसैले भन्दैमा राष्ट्रघाति र राष्ट्रवादी हुने होइन– चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’